Peji yeWatch peji rekuzivisa ndeyechokwadi kuedza kunyora mameseji aNeal V. Frisby kubva kumaCD mharidzo dzake.
Bhaibheri uye Mupumburu mumifananidzo
Yechiporofita mipumburu PDF
Mipumburu yeuporofita nuggets
Mabhuku eMharidzo Nuggets
Jesu anouya nekukurumidza!
Peji reWatch peji rekuzivisa ndeyechokwadi kuedza kunyora mameseji aNeal V. Frisby kubva kumaCD mharidzo dzake. Chinangwa ndechekugadzira mikana yakawanda yekuti vanhu vazive neaya mameseji akafuridzirwa kunyanya avo vanofarira kuverenga pane kuteerera kumharidzo kuburikidza neCD CD fomati.
Ndokumbirawo muziviswe kuti chero kukanganisa mukunyora aya mameseji hakufanirwe kuve kunzi kune ekutanga mameseji asi kukanganisa kubva mukunyora kwekuedza. kwatinotora mutoro. Isu tinokurudzirawo vanhu kuti vateerere kune epakutanga maCD mameseji.
Vanhu vanoshuvira kuwana ekutanga odhiyo maCD, maDVD uye mabhuku aNeal Frisby vanogona kubata hofisi yaNeal Frisby kubva pane yakasungirwa iyi link - www.neeissry.com Zvakare kumubvunzo nezve izvi zvinyorwa zvinotumira mameseji kwatiri kuburikidza nekero yedu yekubata.
Zvirokwazvo tiri pakuguma kwenyika. Zuva rava kunyura parudzi rukuru urwu nenyika yose. Rusununguko sezvatinovaziva ruchakurumidza kupera. Kugona kupupura evhangeri yechokwadi iyi kwava kupera. Rudzi urwu rwakatanga nehondo huru yerusununguko uye kodzero yekusarudza shoko rechokwadi raMwari. Sezvaunogona kuona, chitambudzo chikuru chiri kuuya kumarudzi ose anodavira Mwari wechokwadi. Mwedzi uno tichava nekokotesheni inokosha kubva muraibhurari yaHama Frisby kuti tiunze kukosha kwokupupura munguva ino yokupedzisira. Mwari ane vanhu vake kuti vaite basa rinokurumidza, pfupi uye guru, nokuti ino ndiyo nguva yokuedzwa iyo Magwaro agara achitaura. Zvak. 3:10, “Nokuti wakachengeta shoko rokutsungirira kwangu, neni ndichakuchengetavo panguva yokuidzwa kuchauya pamusoro penyika yose, kuidza vanogara panyika.” Uye ikozvino quote kubva kuna Neal Frisby. Iyi inguva yekukohwa chaiyo! Zvatinoitira Jesu chete ndizvo zvichagara nekusingaperi. Zvimwe zvinhu zvose zviri panyika zvichaparara kana kuparara! “Asi mweya unotenda unokosha pamberi paMwari! – Izvi zvichida zvichadzosa ndangariro dzakawanda, asi wakanzwa rwiyo rwekare rwevhangeri 'Kuunza Muzvisote.' - Zvakanaka, hapasisina imwe nguva yasara yekuita izvi. " – “Nenguva isipi ibvi rose richapfugama pamberi paJesu uye rurimi rwose ruchareurura maererano neMagwaro! Kupupura kwedu nekuponesa mweya kunozonyanya kukosha panguva yatichaMuona! Anoziva zvinhu zvose zvichaitwa nomumwe nomumwe wedu!” - "Zuva raenda kure, zuva rave pazero awa! Usiku hunouya semumvuri werima unotambanudzira kwatiri. Kukurumidzira kwemweya kunoti, shanda kuchine chiedza; nokuti rima rechivi noudzvinyiriri zvichakurumidza kutora pasi rino.” Isa. 43:10, “Imi muri zvapupu zvangu, ndizvo zvinotaura Jehovha, nomuranda wangu wandakasanangura, kuti muzive, mugonditenda, munzwisise kuti ndini iye; ini!” Isu tiri muawa yesimba rinomanikidza rekuenda mumigwagwa mikuru nemaheji! Kukokwa kudana kwechirairo kwava kuda kupera! – “Inzwai shoko raJehovha; nokuti Kutambudzika kukuru kwakaporofitwa kare kare kwava pedyo. Sokuona kunoita gore richibva kure, ndizvo zvichaitirwa vanhu vakakanganwa Musiki wavo pakarepo. - Vakatendeka vachasimudzwa uye pasi richapihwa kune vasina kururama nevakaipa! Tiri panguva yaakati, “Pakarepo anoisa jeko, nokuti kukohwa kwasvika! ( Mako 4:29 ) Izvi zvinoratidza kuti richava basa rinokurumidza, rinokurumidza, uye pfupi. SezvaAkataura, “Tarirai ndinokurumidza kuuya.” -Kuratidza zviitiko zvichangoerekana zvaitika uye zvinoitika nekukurumidza! -Chishamiso chisingatarisirwi kupasirese. Uye pakarepo mapenzi achaziva kuti vasanangurwa vaenda! “Saka zvino mukukohwa kwemvura yokupedzisira, basa rake rinokosha zvikuru rava kutanga kuitika!” Tinofanira kuva nemunamato mumwoyo yedu zuva rega rega sezvo simba rinomanikidza reMweya Mutsvene rinounza muvana vekupedzisira vaIshe. Nyika yakananga kuzviitiko zvinoshamisa uye zvisingatarisirwi kuti zvizadzise chiporofita chine chekuita nekereke yakaipa yakatsauka nehurumende! Pamusoro pezvidzidzo izvi nebasa rokukohwa evhangeri, Ishe vari kuzadzisa chiporofita uye vachipa marudzi ose ezviratidzo kusimbisa kuva pedyo Kwake! "Matenga ari kuzvizivisa, zviratidzo mugungwa, moto wepasi pano uri kufanotaurawo!" Gungwa riri kutinhira uye nyika iri kudedera! Nyika zhinji dziri pamagumo enjere dzadzo. Nguva dzine njodzi! Asi zvakare tinoziva kuti mushure mekuoma kwehupfumi Bhaibheri rinotaura kuti mudzvanyiriri achaunza budiriro yenyika uye shanduko huru dzinosanganisira hurongwa. (Dhan. 8:25) - Saka tinoziva mumvuri weMuchinda weRoma uri pano pasi uye wagadzirira kusimuka! Uyewo zviitiko zvinokosha zviri kuuya munguva pfupi uye mumazuva ari mberi. Iva nechokwadi uye tarisa mazuva ari mberi sezvo Mwari achange achiratidza zviratidzo zvizhinji zvechiporofita pamusoro pekuguma kwenyika! – “Kuchema kwepakati pousiku kuri kuuya pamusoro pevasanangurwa vake.” - "Chokwadi zvese izvi zvakakwana kuita kuti mukristu wese apengenuka uye akasvinura. Nezvikwangwani zvinotiudza kuti Ari pamusuwo!” End quote. Iyi tsamba inofanira kuita kuti muKristu ari wose azive kuti kurumidziro yokupupura zvirokwazvo iri patiri uye vose vanofanira kuita nhamburiko yavo yakanakisisa. Mwedzi uno tiri kuburitsa Volume Number One - Book of Monthly Letters (Chikumi 2005 kusvika Chikunguru 2008) pamwe neDVD rakasiyana, "Ani naani Anoda." (Ona chinopihwa pazasi.) - Kuvimba vese vanobatana vanoenderera mberi nerutsigiro rwavo rwakakosha rweshoko rakakosha iri. Mwari akaisa chikomborero chinoshamisa kune vose vakamira seri kwehushumiri uhu. Ndinoonga zvechokwadi tsigiro yose yakapiwa kuushumiri uhwu. Mweya mizhinji yakaponeswa uye yakanyeverwa nezvenguva ino yekupedzisira yatiri kurarama mairi.
Uchapupu hweDenga neGehena
Mbavha Mune Iyo Husiku Series
Neal Frisby zvinokurudzira
Vakapfura Pasi Mukristu Akapora Chishamiso
Dzvanya pano kuti uwane Bhaibheri uye Mupumburu mumifananidzo
Neal Frisby's echiporofita mipumburu mabhuku
Ikozvino inowanikwa muhoriyamu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX naX
Kumbira mabhuku ako akaisvonaka izvozvi!
Zvemabhuku, maCD nemavhidhiyo
Kana iri muAfrica, yemabhuku aya nematurakiti
kana kufona + 234 703 2929 220
kana kufona + 234 807 4318 009
"Kana taenda ipapo vachatenda."
Copyright © 2020 Dudziro Yekuzivisa Musoro. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
yaakaita Tiyan Software Development Kambani